နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Channel Lover
အနောက်နိူင်ငံရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု့နဲ့ ယူကရိန်းလည်း စတင် ပစ်လွှတ်နေပါပြီ🚀(ရုပ်သံ)
March 2, 2022 by Channel Lover
အနောက်နိူင်ငံရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု့နဲ့ ယူကရိန်းလည်း စတင် ပစ်လွှတ်နေပါပြီ🚀(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အာဏာရှင် လက်ကိုင်ဒုတ်များ မြေသြဇာဖြစ် နေသည့် ယူကရိန်း နယ်မြေ🇺🇦 ယူကရိန်း ကျူးကျော်စစ်မှာ ရုရှား ဘက်ကစစ်သား (၅၀၀၀)ကျော်သေဆုးံကြောင်း ယူကရိန်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ထုတ်ပြန်ထားပြီး တင့်ကား အစီး (၂၀၀)ကျော် ပျက်စီးခဲ့သည့်အပြင် လေယာဉ်တစ်ချို့လည်း ပစ်ချခံရကြောင်း သိရသည်……. တကယ်တော့ ရုရှားဟာ ဘယ်မြို့ကိုမှ မသိမ်းနိူင်သေးပါဘူး……. ယူကရိန်း အဆောက်အဦးတစ်ချို့မှာတော့ ရုရှားအလံတပ်ဆင်ခြင်း / ယူကရိန်း တပ်သားတစ်ချို့အဖမ်းခံရသည့် ပုံစံမျိုး လုပ်ကြံသတင်းမှားဖြင့် ရုရှား ဘက်က လုပ်ကြံနေကြောင်း ယူကရိန်း ဘက်ကတုန့်ပြန်ထားပါတယ်…….. ရုရှား စစ်သားများအသေအပျောက်များပြီး စစ်ရေးလမ်းကြောင်းလွဲမှားမှု့ကြောင့် ယခုအခါမှာတော့ ရုရှားလိုလားသူ ယူကရိန်း ခွဲထွက်ရေးသူပုန်ချေချန်း အစ္စလာမ္မစ် ဂျီဟက် … Read more
အင်တာနက်တွေ ပြတ်တောက်မှုမရှိအောင် ကူညီတော့မည့် နည်းပညာလုပ်ငန်းရှင်
ရုရှားရဲ့ အပြင်းအထန် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံက ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အဖျက်ဆီးခံရရင်တောင်မှ အင်တာနက်သုံးနိုင်အောင် ကူညီပေးမယ်လို့ အမေရိကန် နည်းပညာလုပ်ငန်းရှင် ဘီလျံနာ အီလွန်မတ်စ်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယူကရိန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် မီခါလီယို ဖက်ဒိုရော့ဗ်က သူ့ရဲ့တွစ်တာအကောင့်မှာ စနေနေ့က ‘@elonmusk လို့ လိပ်မူပြိး အခုလိုရေးခဲ့ပါတယ် “အီလွန်မတ်စ်ရေ မင်းက အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို နယ်ချဲ့ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ရုရှားက ယူကရိန်းကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်၊ မင်းရဲ့ဒုံးပျံတွေ အာကာသထဲကနေ မြေပြင်ပေါ် အောင်မြင်စွာ ပြန်ဆင်းသက်နိုင်ချိန်မှာ ရုရှားဒုံးကျည်တွေက ယူကရိန်းအရပ်သားတွေပေါ်ကို ကျရော က်တိုက်ခိုက်နေတယ်၊ ယူကရိန်းအတွက် Starlink စခန်းတွေ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ ရပ်တည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်” နာရီအတန်ကြာတဲ့နောက် ဖက်ဒိုရော့ဗ်ရဲ့ရေးသားမှုကို အီလွန်မတ်စ်ကိုယ်တိုင် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် “ယူကရိန်းမှာ Starlink ဝန်ဆောင်မှု အခုရပါပြီ၊ နောက်ထပ် … Read more
လက်ထပ်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ
March 1, 2022 by Channel Lover
လက်ထပ်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ သေနတ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ယူကရိန်းစုံတွဲ လက်ထပ်နေစဉ်မှာ ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်စစ် စတင်ခဲ့တယ်။ နောက်နာရီပိုင်းအကြာမှာ ယူကရိန်း သမ္မတက စစ်တိုက်မယ့်သူတွေ လက်နက်ထုတ်ပေပးမယ်လို့ ကြေငြာတော့ သူတို့အတွဲဟာ လက်နက်က်ုယ်စီ သွားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ မေလထဲမှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ခံစစ်နဲ့ ဆင်နွှဲနေရတဲ့ ယူကရိန်းမှာ အကူစစ်အင်းအား များစွာလိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ၂ ဦးဟာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Yaryna Arieva နဲ့ Sviatoslav Fursin လို့ သိရပါတယ်။ unicode လကျထပျပွီး နာရီပိုငျးအကွာမှာပဲ တိုငျးပွညျကာကှယျဖို့ သနေတျကိုငျခဲ့တဲ့ ယူကရိနျးစုံတှဲ လကျထပျနစေဉျမှာ ရုရှားက ယူကရိနျးကို ကြူးကြျောစဈ စတငျခဲ့တယျ။ နောကျနာရီပိုငျးအကွာမှာ ယူကရိနျး … Read more
ရုရှားတို့ မျက်ရည်ဘူးသီးလုံးလောက် ကျသွားစေမယ့် လုပ်ဆောင်မှု
February 28, 2022 by Channel Lover
ရုရှားတို့ မျက်ရည်ဘူးသီးလုံးလောက် ကျသွားစေမယ့် လုပ်ဆောင်မှု ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှာ နိုင်ငံတကာငွေပေးငွေယူလုပ်ရင် SWIFT code ထည့်ပေးရပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေက ရုရှားအင်စတီကျူးရှင်းတွေကို SWIFT ဘဏ်ငွေလွှဲစနစ်ကနေစတင်ပိတ်ပင်နေပါပြီ။ SWIFT ဘဏ်ငွေလွှဲစနစ်ကနေ ပိတ်ပင်လိုက်ရင် ရုရှားအတော်ကြီးအထိနာသွားပါလိမ့်မယ်။ (S.W.I.F.T = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) SWIFT ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘဏ်အားလုံးလိုလိုက နိုင်ငံတကာငွေပေးငွေယူလုပ်တဲ့အခါမှာ သုံးရတဲ့စနစ်ပါ။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်ကနေစပြီး တကမ္ဘာလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့ ဒီ SWIFT စနစ်ကိုစသုံးတာပါ။ လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း (၂၀၀) ကျော်မှာသုံးနေတာပါ။ ရုရှားမှာရှိတဲ့ ဘဏ်တွေ၊ စတော့အိတ်ချိန်းတွေ၊ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ အစိုးရအင်စတီကျူးရှင်းတွေဟာ SWIFT နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ငွေကြေးလည်ပတ်နေရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ရုရှားကို SWIFT ကပိတ်ပင်လိုက်တာနဲ့ ပြည်ပငွေပေးချေမှုတွေအကြီးအကျယ်ရပ်တန့်သွားပါမယ်။ သဘောက … Read more
နောက်ဆုံးရ ယူကရိန်းအရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ
နောက်ဆုံးရ ယူကရိန်းအရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ – ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းကိုယ်စားလှယ်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာ တနင်္လာနေ့(ဒီနေ့) ဒေသစံတော်ချိန် မနက်ပိုင်းမှာ စတင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘီလာရုစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပါ။ – နောက်လာမယ့် ၂၄ နာရီဟာ ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ကြောင်း ယူကရိန်းသမ္မတ ဇယ်လန်းစကီးက ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကို ပြောပါတယ်။ – ရုရှားတပ်တွေဟာ ဖက်ပေါင်းစုံကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့် တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ တကယ့်ကို အခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့နေ့ပဲလို့ ယူကရိန်းတပ်မတော်ကပြောပါတယ်။ – လက်ရှိအချိန်အထိ ကလေး ၁၄ ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်း အရပ်သား ၃၅၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ ယူကရိန်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ – ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာ သူ့ရဲ့ နျူကလီးယားတပ်ဖွဲ့တွေကို အရေးပေါ် တပ်လှန့်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ unicode နောကျဆုံးရ ယူကရိနျးအရေးဆိုငျရာ သတငျးမြား – … Read more
ရုရှားသည် နေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအား ကျူးကျော်တော့မည် (ရုပ်သံ)
February 27, 2022 by Channel Lover
ရုရှားသည် နေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအား ကျူးကျော်တော့မည် (ရုပ်သံ) ရုရှားသည် မကြာခင်နေတိုးမဟာမိတ်နိူင်ငံတွေအား ကျူးကျော်နိူင်ခြေရှိ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံဝန်ကြီးချုပ် အလက်ဇန်းဒါးဒီခရော့စ်က ယူကရိန်းနိုင်ငံ ၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် စက်သေနတ် ၂၀၀၀ နှင့် လောင်စာဆီတန်ချိန် ၃၈၀၀ ကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်.. ထို့အပြင် ရိုမေးနီးယားမှာရှိတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀၀ ကို NATO အမြန်တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လိုအပ်ပါက ရုရှားတပ်ဖွဲ့များကို ရင်ဆိုင်ရန် ယူကရိန်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ဟု သိရပါသည်…… ပိုလန်နယ်စပ်မှ ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာရှိ ဘီလာရုစ်တွင် ရုရှားသည်စစ်လက်နက်ပစ္စည်း အများအပြားကို စုဆောင်းနေပါတယ်…….. ယာဉ်အားလုံးကို V စာလုံးဖြင့် မှတ်သားထားသည်..ရုရှားတပ်တွေ နေတိုးနယ်မြေကို ကျူးကျော်လာမှာကို နေတိုးပြည်သူတွေက စိုးရိမ်နေကြပါတယ်…….. ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အနှေးနဲ … Read more
February 26, 2022 by Channel Lover
မြို့ထဲဝင်လာတဲ့ ရုရှားစစ်ကားများကို ယူကရိန်းပြည်သူများ ဆီပုလင်းများဖြင့်ပစ်ပေါက်သည့်(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ မြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်လာသော ရုရှားတင့်ကားများအား ယူကရိန်း ပြည်သူများဓာတ်ဆီပုလင်းများ ဖြင့်ပစ်ပေါက်ကြ🔥 ယူကရိန်းပြည်သူများအား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်နက်များဝေမျှပေး၍ စစ်မှု့ထမ်းဆောင် လို့ရတဲ့သူမှန်သမျှ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ကြဖို့ လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်……. ရုရှား၏ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် လူနေအဆောက်အဦးများစွာ ပျက်စီးနေသောကြောင့် စစ်ရာဇဝတ်မှု့မြောက်တယ်လို့ အော်နေပေမယ့် အာဏာရှင် အတွက်တော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည့်ပုံမပေါ်ပါ…….. 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 မြို့ထဲဝင်လာတဲ့ ရုရှားစစ်ကားများကို ယူကရိန်းပြည်သူများ ဆီပုလင်းများဖြင့်ပစ်ပေါက်သည့်(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ မြို့ထဲသို့ဝင်ရောက်လာသော ရုရှားတင့်ကားများအား ယူကရိန်း ပြည်သူများဓာတ်ဆီပုလင်းများ ဖြင့်ပစ်ပေါက်ကြ🔥 ယူကရိန်းပြည်သူများအား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်နက်များဝေမျှပေး၍ စစ်မှု့ထမ်းဆောင် လို့ရတဲ့သူမှန်သမျှ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ကြဖို့ လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်……. ရုရှား၏ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် လူနေအဆောက်အဦးများစွာ ပျက်စီးနေသောကြောင့် စစ်ရာဇဝတ်မှု့မြောက်တယ်လို့ အော်နေပေမယ့် အာဏာရှင် … Read more
ရုရှား & ယူကရိန်းစစ်ပွဲ နူကလီးယားအဆင့် ပါလာပြီ 🔥 (ရုပ်သံ)
ရုရှား & ယူကရိန်းစစ်ပွဲ နူကလီးယားအဆင့် ပါလာပြီ 🔥 (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ နူးကလီးယား အဆင့်ပါလာပြီ🔥 ရုရှား၏ လုပ်ရပ်အား ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ကြိုးပမ်းမှု့မှန်သမျှသည် သမိုင်းတွင်မမြင်ဖူးသော အကျိုးဆက်များဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဟု ပူတင်၏ စကား ရုပ်လုးံပေါ်လာပါပြီ….. မနေ့ည က နူးကလီးယား လက်နက် ICBM တင်ဆောင်လာသည့်ကား မော်စကို မြို့ထဲ ဖြတ်မောင်းသွားစဉ် ဒေသခံတစ်ဦးရိုက်ကူးထားပုံ 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 unicode ရုရှား & ယူကရိနျးစဈပှဲ နူကလီးယားအဆငျ့ ပါလာပွီ 🔥 (ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ နူးကလီးယား အဆငျ့ပါလာပွီ🔥 ရုရှား၏ လုပျရပျအား ဝငျရောကျစှကျဖကျရနျ ကွိုးပမျးမှု့မှနျသမြှသညျ သမိုငျးတှငျမမွငျဖူးသော အကြိုးဆကျမြားဆီသို့ ဦးတညျသှားမညျဟု ပူတငျ၏ … Read more
နိုင်ငံထိလာလို့ ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ယူကရိန်း ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဟောင်း ဗစ်တလီကလစ်ရ်ှကို ဗစ်တလီကလစ်ရ်ှကိုက လက်ရှိမှာ ယူကရိန်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ကိဗ်ရဲ့ မြို့တော်ဝန်ပါ။ ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံအဖြစ်နဲ့ ထင်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ခေတ်၊သူ့အခါတုန်းက လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့သူလို့ ဆိုရပါမယ်။ အားကစားသမားဘဝက အနားယူပြီးနောက်မှာ သူက နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကိဗ်မြို့တော်ဝန်အဖြစ်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်လာချိန်မှာ ဒီလက်ဝှေ့သမားကြီးရဲ့ ဗီဇက ပေါ်လာပါပြီ။ “ဒီသွေးစွန်းမယ့်တိုက်ပွဲအတွက် ကျနော်အသင့်ဖြစ်နေပြီ၊ ကျနော့်မှာ ရွေးချယ်စရာမရှိဘူး၊ ဒါပဲကျနော်လုပ်ရမှာပါ၊ ကျနော်တိုက်ခိုက်သွားပါမယ်” လို့ ကိဗ်မြို့တော်ဝန်က ပြောလိုက်ပါပြီ။ ရုရှားရဲ့ ကျူးကျော်လာမယ့်အရိပ်အယောင်တွေရှိနေကတည်းက သူက မြို့သူမြို့သားတွေကို သတ္တိရှိဖို့၊ စိတ်မလှုပ်ရှားဖို့နဲ့ ရဲရင့်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း တိုက်ပွဲဝင်တော့မှာပါ။ crd unicode နိုငျငံထိလာလို့ ကိုယျတိုငျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ ယူကရိနျး ကမ်ဘာ့ဟဲဗီးဝိတျခနျြပီယံဟောငျး … Read more